XOG: Ciidamo laga qoray gobalada Mudug, Nugaal & Sool ee Puntland oo la geeyey Muqdisho, Loogana dhoofiyey..
September 28, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxu helay xog dhameystiran oo ku wajahan in dhalinyarro Askar ah oo laga aruuriyey gobalada Puntland qaarkood la geeyey magaalada Muqdisho, kuwaas ooqeyb ka ahaa ciidamo tababar loogu diray mid kamid ah dalalka Barriga Afrika kuyaala gaar ahaana dalka Eritrea oo ciidamo daacad u ah Sirdoonka Soomaaliya tababar siinaysa.
Xogta uu helay warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ciidamadan oo diyaarad looga qaaday magaalooyinka Gaalkacyo & Garoowe, ay masuuliyadooda lahaayeen wasiir, Xildhibaan iyo siyaasiin kasoo jeeda Puntland oo kusugan magaalada Muqdisho.
Ciidamadan gaarka ah ayaa ujeedada loo qaaday ay ahayd in ay ka dhigan tahay sidii ay qeyb uga noqon lahaayen ciidamo tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 1,400 Askari oo ay dawladda Eritrea u tababarayso Soomaaliya.
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobalka Nugaal, Lataliye Madaxweynaha Soomaaliya oo ka soo jeeda gobalka Mudug iyo Wasiir katirsan Xukuumadda Faderaalka kana soo jeeda gobalka Sool ayaa lahaa masuuliyada daabulka ciidamadan iyo keenidoodaba, waxayna inta badan qoreen deegaanada ay ka soo jeedaan dad u dhashay.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya oo la hadlayay ciidamadan ayaa u sheegay in ay soo qaadan doonaan tababaro ku wajahan adkeynta ammaanka, La dagaalanka howlgalada deg deg ah ee argagixisada iyo howlaha Sirdoonka, wuxuuna ka codsaday in ay u adkeystaan tababarada.
Xogta warsiduhu wuxuu ogaaday in ciidamadan laga qaaday Puntland ay gaarayaan ku dhawaad 140 Askari, oo badankooda ah dhalinyaradii ka soo baxay dugsiyada Sare oo lagu qanciyey in ay darajooyin ciidan heli doonaan iyo mushaar ku filan, aysana furimaha dagaalka tagi doonin.
Puntland, waxay horey ugu wareejisay dawladda Soomaaliya ciidamo gaaraya 3000 Askari, kuwaas oo ilaa maanta aysan jirin cid ka wada hadashay, gaar ahaana aan helin xaquuqda ay helaan ciidamada dib loo qarameeyey ee Soomaaliya, waxaana Warsiduhu uu hadda wadaa xog baaris arrimahan ku saabsam.
Cidamada laga Qoray Sool,Nugaal Mudug oo Erataria Tababarka loqayday garmeey dhacday?? Su’aasha kale Masulinta puntland wax ma’ka ogyihin?? mise si suuq madoow ah aya lagu Qortay? su’asha kale markay Taba barka dhameystan Xagge ka hawl galayan?,4 Gobal oo kala ah Sanaag,Karkaar Barri & Haylan kuwas maxa loga rebay?? ileen ayaguba wa puntalnd? maxayse tahay Arinta laqarinayo?